UKUGQIBELA KWAMAKRELE: KUTHETHA UKUTHINI KWI-TAROT?
El ijack yemihlakulo Ichazwe ngeenguqulelo ezininzi, kweli nqaku siza kukuxelela ukuba iyintoni kanye kanye kunye nomyalezo wayo. Sukuphoswa yiyo.
Ikhadi elinamandla elinentsingiselo ezahlukeneyo kuxhomekeke kwindawo ekuhlolwe kuyo. Siza kufumanisa apha.
Ekuqaleni kufuneka sazi ukuba iJack yeshafesi yeyakhe Umgangatho wespanish, Eyindawo esemgangathweni enamakhadi angamashumi amane anesibhozo okanye amashumi amane, kukho imidlalo emininzi yamakhadi eSpanish, eyona ixhaphakileyo yeyamakhadi angamashumi amane, ahlulwe aba ziintsapho ezine «iintsapho», «iipeyinti» okanye «iisuti».
Lo mdlalo weereers okanye amakhadi enziwe ngamakhadi iisuti ezine okanye uthotho; igolide, iikomityi, amakrele kunye neewands, ngokulandelelana kuthotho ngalunye lunamakhadi ali-12, amanani ukusuka ku-1 kuye ku-9 aze ama-3 aseleyo ahambelane nenkosi enkulu ye-12, knight 11 kunye nejack 10.
1 Inkcazo yemizobo yejack yemikhosi
2 Intsingiselo yejack yemihlakulo
Inkcazo yemizobo yejack yemikhosi
Ikhadi limelwe ngumntu omileyo, ephethe ikrele kwesinye sezandla zakhe ezingafundiswanga, nto leyo emele ukujongana nazo zonke iingxaki, izoyikiso, amashwa, kufuneka ube nesisombululo ezandleni zakho, usebenzise ikrele lakho ukunciphisa bonke obo bunzima, uhlala usebenzisa ubuqili kunye nobukrelekrele, usazi ukuba ubetha nini ukuba ube ngumdlali ophambili wengcinga enobuchule kwaye ikukhokelela empumelelweni nasempumelelweni.
Amehlo alo mntu azolile kwaye azolile, kwamanye amakhadi kubonakala ngathi ajonge phantsi, kwamanye ajonge ngaphambili, okuthetha ukuba uhlala ethe qwa kodwa esekwe ekuzoliseni, ejonga inyathelo ngalinye olithathayo ukuze ungathathi gwenxa, unyathele Uqinile kwaye uzinzile, uthetha ngezigqibo ezinokuthi zenziwe kwaye uphaphile kuyo yonke into emngqongileyo.
Umnqwazi omthubi noluhlaza ziingcinga ezibonisa ithemba lokuphumelela kunye neenjongo, umnqweno wokubanakho ukufezekisa izinto ezintle, omthubi uthetha ukuba ubutyebi babo busengqondweni, kuyo yonke into eyenzekayo nesele izakwenzeka. Zisengqondweni yomntu, kwaye ezi zinto zinokwenzeka xa wenza ngononophelo.
Intsingiselo yejack yemihlakulo
Imele into yomoya, kwaye ekuvumiseni ngeenkwenkwezi ilawulwa ziimpawu zeLibra, iGemini kunye neAquarius, zizidalwa ezineempawu ezithile ezinje ngamandla engqondo, zingabantu abaneenkcukacha, abanesakhono kwishishini, banophuhliso olubanzi lwengqondo.
Le jack yamakhadi espain kumgangatho waseSpain yaziwa ngokuba likhadi elikhupha umyalezo, xa linikwa lithetha ngeempembelelo eziyimfihlakalo nezifihlakeleyo, ubumoya kunye nothando lwabantu.
Ibhekisa kwingqiqo yobukrelekrele yeemvakalelo, imalunga nolawulo lweemvakalelo ezilungileyo nezingalunganga, kufuneka zithunyelwe ukuze zazi apho kugxilwe khona, ngokuchanekileyo nangokungaqiqisisiyo.
Umntu obonisanayo ugcina umoya omncinci, hayi ngenxa yobudala, kodwa ngenxa yento ayiphethe ngaphakathi, uzele zizicwangciso, iinjongo, ukuzibophelela, ekucetyiswa ukuba angqongwe ngabantu abanezi mpawu ukuze zixhaphakile ngokupheleleyo.
Kuya kufuneka ubaphephe abantu abaminxa okanye ababuze izimvo zakho, kuyafuneka ujongane nabantu abazimilisayo ukuze unganyanzeli ubudlelwane kunye nayo yonke into ehamba kwaye isebenze ngeyona ndlela ilungileyo.
Inxalenye engathandekiyo yale leta kukuba iyathanda ukuzinyanzela kwezinye iimeko ngenxa yokuzincama kwayo kunye nokuzenzela, kuba ifuna ukuviwa kwaye ibe liziko lokuqwalaselwa, ithande ukwaliwa ngabantu abayijikelezileyo.
Qhubeka ufunda, malunga neleta evela ijack yegolide kwaye ungene el mundo emangalisayo ukuba ikubonisa.
Intsingiselo ngokuxhomekeke kwimiba ebomini evavanyiweyo kunye nendawo ephumayo:
Isikhundla esifanelekileyo: Thetha ngokufika kweendaba eziza kukunika uxolo lwengqondo olilindeleyo, awuyi kuba neengxabano okanye iingxaki ebomini bakho, ukuba azifikanga iindaba ezilungileyo kakhulu, uya kuba nezixhobo zokuzisombulula, unesisombululo ezandleni zakho.
Indawo eguqulweyo: Ityhila uguquko lweemvakalelo, ukusweleka komntu ongalindelwanga, akufuneki ube ngumntu ongalawulekiyo, okanye igunya, kufuneka ufumane uxolo lwangaphakathi, funa uncedo kumasebe ahlukeneyo ezengqondo, okanye imethaphysics.
Isikhundla esifanelekileyo: Sithetha ngokufika kweendaba apho ufumana khona ilifa, oku kunokungenelela kwisihlobo, nangona kunjalo, unomntu olwalamano naye, oya kujonga ukuba ifikelela ezandleni zakho.
Indawo eguqulweyo: Yenza intengiso, ukukopela, ukuqhatha, ukulahleka kwemali, ukuphanga, ukuxhwila umntu osondeleyo, kufuneka uzikhathalele ukuba bakumkhondo wakho.
Isikhundla esifanelekileyo: Isifo esinokubakho esibangela ukuba ulaliswe esibhedlele, phantsi kononophelo lweengcali zezempilo, uya kurhaxwa ngokungakwazi ukusombulula imali, kufuneka ujonge iimvakalelo zakho kwaye uyokoyisa kule ntlekele incinci, akukho mfuneko yakuzixhalabisa.
Indawo eguqulweyo: Uya kufumana iindaba ezimbi kakhulu eziza kutyhafisa umnqweno wakho wokuphila, iingxaki zempilo ezinzima kunye nokwaphukelwa ziinkqubo zomzimba zokuqala, ukuba awujongani nazo nobona buchule ungaphumelela edabini.
Isikhundla esifanelekileyo: Kumalunga nokuba nomntu okuthandayo kwaye acinge ngawe emfihlekweni, umntu uyakukuxelela ukuba ungubani, ubonakalisa umdla wokudibana naye, wenze ngononophelo olukhulu ukuqinisekisa ukuba ungena ebomini bakho ngeyona ndlela intle, uzithembe uyakuba liqabane lakho lomphefumlo, sebenzisa izivamvo zakho.
Indawo eguqulweyo: umntu omncinci kakhulu uza kufika, enomdla omkhulu kuwe kufuneka unakekele inkangeleko, ayisiyiyo yonke into ebengezela ngegolide, ithetha ngobuqhetseba nobuxoki.
Isikhundla esifanelekileyo: uyakufumana iindaba ngeposi yokunyusa, iimviwo zesicelo okanye into onethemba layo, ungacingi kakhulu kwaye uthathe umngcipheko wokuba uza kuphumelela, sebenzisa ingcinga, ukuqiqa okukuqhubela phambili ukufezekisa oko ubukunqwenela kakhulu, nguwe Ixesha lokuqaqamba kwaye uphumelele, unakho amandla kunye nobukrelekrele bokwenza njalo.
Indawo eguqulweyo: Umntu osondele kakhulu onomdla wokwazi ukuba uzenza njani izinto, ngaphezulu kokuncoma, ngumona, kukuhleba nokuhleba ngasemva kwakho, ulumke abantu abakungqongileyo ngokusondeleyo.
Ukuba ufuna ukuqhubeka nokonwabela umxholo wethu, awungekhe uyeke ukufunda inqaku lethu kwi jack yekrele.